Ungakha kanjani iphrofayli ye-backlink enamandla?
Kunemibono eminingi engalungile embonini yokwakha isixhumanisi ejwayelekile kakhulu embonini yokuthengisa ye-digital. Kungakhathaliseki ukuthi uneminyaka engakanani yokuhlangenwe nakho okukhona kulolu chungechunge, awusoze wazi kahle ukuthi i-Google iyamukela kanjani isayithi lakho nokuthi yini le nqubo yokusesha izokwenza ngomzuzwana ozayo. Abathuthukisi be-Google kuphela nabaphathi bewebhu bangakwazi ngokuqinisekile. Kumele sisebenzise ukuthi iyiphi idatha esinayo kanye nokuhlangenwe nakho kwethu ukuthinta isikhundla sethu sesayithi.
Kunamazwi amaningi avamile kanye nemibono emisha mayelana namaphrofayela e-backlink nama-backlinks. Ake sixoxe ngokujwayelekile kubo:
izixhumanisi "Rel = nofollow" azihlinzeki nganoma yiliphi inani
"Rel = nofollow" ithegi e-backlink ekhethekile etshela ibhokisini lokusesha alikhombisi izixhumanisi futhi ungadluli noma iyiphi i-juice yokuxhumanisa phakathi kwabo. Kunezimpikiswano eziningi mayelana nokubaluleka kwezixhumanisi ezingezansi. Abanye abakwa-webmasters bathi akukho sidingo sokwakha izixhumanisi ezinjalo, kanti abanye bathi ukubaluleka kokulandelana kwe-backlink kungancishiswa. Engqondweni yami, ayikho impendulo ecacile yalo mbuzo njengoba inani labo lingancika. Lezi zixhumanisi ezingenayo azibandakanye njengezicucu ze-standalone. Isibonelo, uma siqala iwebhusayithi futhi siyicebisa ngenani lezingqinamba ze-PR "ezingezansi". Ngenxa yalokho, ngeke uqaphele ukunyuka okungazelelwe kwamanani omgwaqo. Ngicabanga ukuthi i-Google yenza umsebenzi omuhle wokuqonda isixhumanisi "esingalandeli" ngokuphathelene nalokhu.
Kodwa-ke, kufanelekile ukubalula izindawo ezithile lapho izixhumanisi ezingekho emlandweni zinomthelela omkhulu ekubaleni kwesayithi kanye negunya lewebhu lewebhu. Lezi zindawo zihlanganisa amawebhusayithi ahlelwe kahle, amaphrofayli e-backlink afaka phakathi "izixhumanisi ezingezansi" futhi uma imibhalo ye-anchor ihlelwe kahle. Zonke izindawo ezilandelayo zineziprofetho ezingemuva kwe-backlink. Kungabangelwa izizathu eziningi ezahlukene ezifana nemisebenzi ye-spammy noma izinhlelo ezihambisanayo.
Ngisebenzise noma yini engilandela emuva emuva, ngizama ukubathola emithonjeni ephezulu yewebhu ngendlela yamazwana ebhulogi, izixhumanisi, ukufakwa kokuhlela nezinye izici zokwakha izixhumanisi. Ngenxa yalokho, ngithole izixhumanisi zekhwalithi ezinhle ngethegi elithi "rel = nofollow. "Lawa maxhumanisi alethe ukwanda okungaphezulu kwezingu-100% ezenzweni zegama elingukhiye.
Yingakho ngingasho ukuthi i-nof elandele emuva i-backlink ingaletha ukubaluleka kusayithi lakho. Nokho, kubalulekile ukuthi zitholiwe kanjani. Izinga elihle le-backfink elihle le-organic lisebenza ngokugcwele ekuxhumaniseni izilinganiso zezixhumanisi ezingaphezulu kakhulu.
Ingabe indaba yekhwalithi?
Uma ngabe ungangibuze lo mbuzo nje emva kokubuyekezwa kokugcina kwe-Google Penguin, ngabe ngabe ngikubukeke njengento ehlelekile njengaleso sikhathi wonke umuntu wayebuka kuphela izixhumanisi ezingenayo. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi, ukugcizelelwa kushintshiwe. Namuhla, amawebhusayithi amaningi akhipha imithombo yamanye amawebhusayithi ngisho noma anezixhumanisi ezimbalwa zekhwalithi futhi anezixhumanisi ezingenakubalwa ze-spammy kusuka kumakhasi okubhekisela. Yingakho amasayithi ane-backlink amaningi angase abe nomkhawulo phezu kwamanye anezixhumanisi ezimbalwa zezinga eliphezulu. Eminyakeni eyedlule, sibonile ukuhlanganiswa okukhulu nenombolo ye-backlinks, hhayi nje izinga labo, elichaphazela abadlali be-niche enkulu kakhulu emakethe ezindaweni eziphezulu.
Ngaphezu kwalokho, kungase kuzwakale kungaqondakali, kodwa namanje, ukuba nezixhumanisi eziningi ezivela esizindeni esifanayo kungakusiza, futhi i-Google iyayithanda. Awunobungozi ukuthola izinhlawulo ngisho noma ungazuza kuwo. Ngaphezu kwalokho, inani eliphelele le-backlink yangaphandle lingase lenze imizamo yakho ye-SEO njengengxenye enkulu yokubambisana. Ama-Webmasters aphinde abize lezi zenzakalo zokuxhumanisa izixhumanisi "isixhumanisi se-velocity Source . "